लकडाउनलाई सीप तिखार्न खर्चेकी जम्मुकी बेकरी उद्यमी « Khabarhub
जम्मु सहरमा बस्ने सना गुप्ता अहिले गान्धी नगरस्थित एउटा सरकारी कन्या क्याम्पसमा बी. कमको अध्ययन गरिरहेकी छिन् । नजिकैको जम्मु विश्वविद्यालयमा एबीएको अध्ययन गर्ने उनको धोको छ ।
तर, उनको पहिचान यतिमात्र होइन । उनको आफ्नै व्यापार छ ।
अहिले उनले जम्मुकै अख्नूर रोडमा रहेको बर्नइ भन्ने स्थानमा आफ्नै व्यापार सुरु गरेकी छिन् । उनी ‘बाटर एण्ड क्रम्ब्स’ नामक बेकरी चलाउँछिन् । उनले ब्राउनी, कपकेक, केक जार, ड्राइ केक, असोर्टेड चकलेट र कस्टमाइज केकजस्ता मीठा मीठा परिकार बनाएर जम्मुका मानिसहरुलाई खुवाइरहेकी छिन् ।
धेरै पनि भएको छैन कोभिड महामारीे चरम उत्कर्षमा थियो । कोभिड महामारी र लकडाउनको फुसर्दिलो समयलाई आफ्नो बेकिङ र पाककलाको सीप तिखार्नमा खर्च गरिन् । उनलाई यसमा आमा र बहिनीले पनि साथ दिए । उनका लागि लकडाउनको फुर्सदिलो समय पर्याप्त पनि थियो ।
बेकरीप्रतिको रुचिकै कारणले गर्दा कुनै समय पञ्जाब प्रान्तको लुदियाना सहरमा यसबारे तालिम समेत लिएको उनी बताउँछिन् ।
‘अहिले म गान्धी नगरको सरकारी कन्या क्याम्पसमा बी. कम पढिरहेकी छु र जम्मु विश्वविद्यालयबाट एमबीए सकेपछि पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु । म अहिले आफ्नो अध्ययनमा बढि ध्यान दिइरहेकी छु । भविष्यमा सफल व्यापार स्थापित गर्नेबारे पनि मेरो ध्यान छ ।’
यस कामप्रति परिवारबाट समेत सहायता मिलेको उनी बताउँछिन् ।
‘म अहिले आफ्ना उत्पादनहरु इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रवर्द्धन गरिरहेकी छु त्यहाँबाट पनि मलाई ठूलो हौसला मिलेको छ ।’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार कसैसँग कामप्रति इच्छाशक्ति र लगाव छ भने जहिल्यै पनि त्यहाँ कदम चाल्ने आवश्यकता रहन्छ ।
प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०७९, शनिबार १ : ०४ बजे